नेपाली कांग्रेस « Janata Samachar
कांग्रेस मुख्यालयमा नेविसंघको प्रदर्शन, बैठक शुरू
कान्ति न्यौपाने काठमाडौ । नेपाल विद्यार्थी संघका नेता तथा कार्यकर्ताले बुधबार नेपाली कांग्रेस मुख्यालयमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेविसंघका नेता कार्यकर्ताले नेतृत्वको उमेर हद कायम राख्न माग गर्दै प्रर्दशन गरेका
नेता रिजालले बैठकमै भने– रामचन्द्रजीलाई त गिलास चल्छ कि !
काठमाडौं । बिहानैदेखिको वर्षाले काठमाडौं उपत्यकामा बिहिबार अघिल्लो दिनको तुलनामा बढी चिसो भएको छ । चिसो बढिरहेको बेला प्रमु्ख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सम्पादन समिति बैठक चलिरहेको छ ।
एनसेल कर प्रकरणः ‘हामी पहिले नै सही थियौँ’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं युवानेता विश्व प्रकाश शर्माले एनसेल कर प्रकरणमा आफुहरुले यसअघि भनेकै कुरा सही भएको बताउनुभएको छ । यसअघि एनसेलसँग लाभकर उठाउनुपर्छ भन्दा आफुहरुलाई गलत भन्नेलाई
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा महासमिति बैठकले पारित गरेको पार्टीको विधान, नेविसंघ
कांग्रेसको देशैभर प्रदर्शन (अपडेट)
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार देशैभर प्रदर्शन गरेको छ । काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादी चरित्र देखाएको
कांग्रेसद्वारा संसदीय सुनुवाई समिति बैठक बहिष्कार
काठमाडौं । विभिन्न आयोगको लागि प्रस्तावित गरिएकाहरुबारे छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय सुनुवाई बिशेष समिति बैठक प्रतिपक्ष सदस्यहरुले बहिष्कार गरेका छन् । संवैधानिक समितिले विभिन्न ५ आयोगका लागि प्रस्ताव गरेकाहरुबारे सुनुवाई गर्न आइतबारको
चिकित्सा शिक्षा विधेयकः कांग्रेसद्वारा संशोधन दर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सांसद राधेश्याम अधिकारीले बिहीबार संशोधन दर्ता गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । बिहीबार बिहान संसदीय दलको
आन्दोलन घोषणापछि देउवा किन छिरे सुटुक्क बालुवाटार ?
काठमाडौं । सरकार र प्रतिपक्षबीच आरोप प्रत्यारोप भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ
कांग्रेस बैठक बस्दै, सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । पार्टी मुख्यालय सानेपामा हुने बैठकमा महासमितिले पारित गरेको विधान, नेपाल विद्यार्थी संघको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति र
‘यही पाराले अर्को चुनावमा झन् दुर्दशा हुन्छ’
रुपन्देही । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक संस्कार र आचरण सुधार नहुँदा पार्टी कमजोर भएको बताउनु भएको छ । वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रजातान्त्रिक विचार समाजले मंगलबार बुटवलमा आयोजना
माैसममा सुधारकाे संकेत, केही भागमा वर्षा र हिमपात हुने